कुन बार कस्तो रङ्गको कपडा लगाउने ? जान्नुहाेस् – Sanchar Patrika
कुन बार कस्तो रङ्गको कपडा लगाउने ? जान्नुहाेस्
July 7, 2020 276
रंगहरूको पनि आफ्नै प्रभाव हुन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ, रंगले तपाइँको भाग्य बदल्न सक्छ? प्रत्येक रंगको फरक महत्त्व हुन्छ, केहि रंगहरुले तपाईलाई सकरात्मक उर्जा दिन्छन् भने केहि रंगले तपाईको काम बिगार्न सक्छ।
तपाईंलाई ती रंगहरुकोबारे केहि भन्न जादैछौ, जसले तपाईंको भाग्य परिवर्तन गर्नेछ। यदि तपाईले हप्ताको प्रत्येक दिन यी रंगका कपडा लगाउनुभयो भने, तपाईको भाग्यमा निश्चित रूपमा परिवर्तन आउनेछ। एक चोटी प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो भाग्य परिवर्तन गर्नुहोस्।
आइतबार: आइतवार भगवान सूर्य को दिन हो। यदि तपाई यस दिन पहेंलो र रातो रंगको लुगा लगाउनुहुन्छ भने, तपाईले सकारात्मक उर्जा महसुस गर्नुहुनेछ। यस दिन तपाई उत्साहित हुनुका साथै स्फूर्ति महसुस गर्नु हुनेछ।
सोमबार: सोमबार चन्द्रमाको दिन हो। यस दिन सेतो रंगको कपडा लगाएमा शुभ मानिन्छ। यदि सम्भव छ भने, तपाई सोमबार सेतो लुगा लगाउनुहोस् । अनि मात्र तपाईले प्रसिद्धि र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
मंगलबार: मंगलवार हनुमानको दिन हो। यस दिन, तपाईले रातो, सुन्तला, गाढा खैरो र चकलेटी रंगका लुगा लगाउनुपर्नेछ। यो दिनको गृह मंगल हो। यदि तपाई यस दिन यी रंगका लुगा लगाउनुहुन्छ भने तपाईको बोलिले अरूमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
बुधबार : बुधबार गणेश भगवानको दिन हो। गणेश भगवानको सबैभन्दा प्रिय बस्तु भनेको घास हो। यस दिन हरियो रंग निकै नै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिन हरियो रंगको लुगा लगाएमा तपाईले विशेष फलहरु प्राप्त गर्नुका साथै रोजगार र व्यवसायमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुहुनेछ।
बिहिबार: बिहीबार साई र बृहस्पति को दिन हो। यी दुबै ईश्वरको प्रिय रंग पहेलो हो। बृहस्पतिलाई सम्मानको देवता पनि मानिन्छ। त्यसकारण, यस दिनमा पहेलो धारण गर्नु शुभ मानिन्छ। यदि तपाई बिहिबार पहेलो लगाउनु हुन्छ भने, पूरा दिन तपाईको लागि धेरै भाग्यशाली साबित हुने छ।
शुक्रबार : शुक्रवार लक्ष्मी माताको दिन मानिन्छ। यस दिन जहिले पनि सफा लुगाहरू लगाउनुहोस्। कालो रंग बाहेक अरु रंगको कपडा प्रयोग गर्नुहोस्। सफा कपडा लागाउदा लक्ष्मी माता प्रशन्न हुने गर्दछिन्।
Prev२४ घण्टामा ६८८ को’रो’ना सं’क्र’म’णमुक्त, हालसम्म ७ हजार ४९९ नि’को भए
Nextमास्क लगाउन आग्रह गर्दा यात्रुले गरे निर्घात कुटपिट, बसचालक मृ,त्युको मुखमा
शुक्रबार लानसेट जर्नलमा भ्याक्सिन प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको रिपोर्ट प्रकाशित भएको हो ।